Mortar na pestle, pestle na motar, marble tray - Kingway
Kpoo Iron Enamel Kuki
Cast cook preseasoned cookware
Kwụsị Cookware ụlọ nkedo iron
Granite Mortar na Pestle
Egwuregwu mabul na pestle
Ngwaahịa Nkume ndị ọzọ
Kasị Mma Flat Pan
Iji Nweta Ndị Enyi
Maka mmanya ma ọ bụ nri abalị
Shijiazhuang Kingway Imp. & .Gbasa. Co., Ltd e hiwere na 2 0 0 8 ma dị na shijiazhuang obodo, hebei Province, China, iga njem dị mma ma gburugburu ebe obibi mara mma. Factorylọ ọrụ anyị na-ekwenye ekwenye na-ekpuchi mpaghara 33,000 square mita ma nwee ndị ọrụ 82. Enwere ụzọ mmepụta anọ dị iche iche dị ka mgbatị DISA, ịchekwa ụzọ, enam.
Ọrụ MAKA & &M QUAKA AH QÚR QU
Ngwá na Pestle
Zuru okè maka ịzọpịa ngwa nri niile na-esi ísì ụtọ. Odi nma ka agwakọta ma jeere guacamole-ma obu iji mee pesto na ndi ozo.
Kpaa Iron Iron
Zuru ezu maka isi nri na ijere otu ụdị akwụkwọ nri, akụkụ, na ihe ụtọ, na-enye njigide okpomọkụ na-enweghị nhazi na ọbụna kpo oku; Ekpuchi mkpuchi na ekpomeekpo ebe aka na-enye ohere maka ibufe dị mfe
KAR PR P ISHBỌCH M NSỌ
Ihe: marble eke ma ọ bụ ihe ndozi Nha: 20x15x3cm mbukota: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Ma ọ bụ igbe a na-acha uhie uhie • Ihe zuru oke iji rụọ maka bọọdụ achịcha • dị mfe ọcha. • ahaziri etu esi edozie ya. • kọntaktị nri na-adịghị ize ndụ ma anyị nwere akụkọ LFGB na FDA.
Ihe: marble eke Size: dia.13cm, elu 8cm na-eburu ya: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Marble Mortar na pestle • zuru oke maka ịkụpịa ihe niile na-esi ísì ụtọ na ịme ngwakọta na-esi ísì ụtọ. • Dị mma maka ịgwakọta na ijere guacamole — ma ọ bụ maka ime pesto na ụdị sọks ndị ọzọ. • Soro jiri akwụkwọ letus mee dị ka nnukwu ebumnuche na-eje ozi. • udiri ime n'ime ngwa ngwa na-enyere aka ịkụcha ma na-egweri ihe. • Nnukwu ọgwụ na-arụ ọrụ maka gị, na-eme ka egweri, agwakọta na agwakọta nke ọma.
Ihe: marble ma ọ bụ ihe ndozi Ngwunye: 43x30x1.5cm mbukota: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja okwute ma ọ bụ bọọdụ ịpịgharị mma • fect zuru oke maka ịbe ma ọ bụ jeere ụdị nri dị iche iche ozi. • mfe ihicha. • ahaziri etu esi edozie ya. • kọntaktị nri na-adịghị ize ndụ ma anyị nwere akụkọ LFGB na FDA.
Ngwaahịa aha nkedo ígwè a tụgharịrị agagharị agagharị 43x23cm elu 1.5cm mkpuchi preseasoned mbukota aja aja igbe ma ọ bụ agba agba akara ahaziri ahaziri ikike Ikike ngbanye ọkụ zuru oke maka isi nri na ijere akụkụ akwụkwọ nri, akụkụ, na ihe ọ desụ Providụ na-enye njigide okpomọkụ na-enweghị atụ na ọbụlagodi kpo oku; mkpuchi akàrà na ekpomeekpo ebe ejiri aka na - enye ohere maka ibufe FDA nke akwadoro tupu oge eji eme ihe na - enye ohere iji ya mee ihe ngwa ngwa nwere ike ịbụ ...
Ngwaahịa aha nkedo ígwè mini casserole na mkpuchi dayameta 10cm, 26cm elu 5cm, 11.5cm mkpuchi preseasoned mbukota agba aja aja ma ọ bụ igbe agba akara ahaziri nke ọma Ikike njigide okpomọkụ dị mma maka nri na ijere akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ nri, akụkụ, na ihe ụtọ. Na-enye njigide okpomọkụ na-enweghị nhazi na ọbụna kpo oku; mkpuchi mkpuchi na ekpomeekpo ebe ejiri aka na-enye ohere maka ibufe FDA akwadoro tupu oge nkedo ígwè na-enye ohere maka ...
Onu Number KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Njirimara igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka akwa njikwa na-acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, pink, nwa, oroma mkpuchi nke enamel mkpuchi 1.Heavy-task enamel mkpuchi 2. Mgbasa ọkụ kachasị elu na njigide 3.Cast iron heats nwayọ nwayọ na ntụgharị 4.Perfect maka nri esi egbu egbu Njirimara: Igwe igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka njikwa dị larịị nke dị elu iko agaghị emeghachi omume na ngwongwo Prof ...
Nke 505, Zlọ Zhongyuan, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei Pro, China